YEYINTNGE(ကနဒေါ): Saturday, March 14
ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မလာအောင် တားဆီးပိတ်ပင်ထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိရင်တောင်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာကျင်းပမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
စစ်တပ်က ဗီတိုပါဝါကိုင်ထားတဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို NLD အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့ ပိုပြီးတွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီနိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေး တားမြစ်ထားတာတွေကို ဖယ်ရှားသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ NLD ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ အများစုနေရာရဖို့နဲ့ အားကောင်းတဲ့အနေအထားကနေ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ဖို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 3/14/20150comment
ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါတောင် ရှိသွားပြီလဲ မသိတော့ပါဘူးဗျာ ၊
ဟိုး . . . တော်တော်ကြာကြာကတည်းကိုက
ကျွန်တော် အထပ်ထပ်အခါခါ စဉ်းစားလာတာ -
အဲဒါ ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစား ဘယ်တော့စဉ်းစားစဉ်စား
သေသေချာချာ့ ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ပြန်စဉ်းစားလည်း
အဖြေက ပြောင်းပြန်ချည်းပဲ ထွက်နေလွန်းလို့ဗျာ -
အဲဒါ ဝိုင်းပြီး ခေါင်းစားပေးကြပါ .. လို့ !
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါပဲဗျာ - အေးအေးဆေးဆေး စား ပါ ၊
ဒီလို - ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ -
" နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှူ့" ဆိုတဲ့ ပုဒ်မဗျာ -
အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်က ဒီလိုစဉ်းစားမိတာ ၊
နိုင်ငံတော် ဆိုတာ အမှန်တကယ်ကတော့ အစိုးရပါပဲဗျာ - ဟုတ်တယ်ဟလား !
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများကို ဘာညာဘာညာ . . . လျှောက်ပြောတယ် လျှောက်ရေးတယ်ဆိုရင် ဆွဲစိတာလေဗျာ - ဒါပဲဟာ ၊
အဲ့တော့ - နိုင်ငံတော် ဆိုတာ အစိုးရ ပေါ့ - OK နော်
အဲ - အဲဒီအစိုးရကိုခန့်တာကကျတော့ ဘယ်သူလဲ . . . .
. . . ပြ ည် သူ
ဟုတ်တယ်လေ - ပြည်သူဆိုတာ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဟာ
အဲ့ဒီပိုင်ရှင်သူဌေးကြီးက မှ - ဟို အစိုးရ ဆိုတဲ့ လူတွေကို ငါတို့အလုပ်တွေ
ခဏလာလုပ်ပေးစမ်းကွာ ဆို လခပေးပြီး ခေါ် ခိုင်း ထားတာလေ !
အဲတော့ . . . .
ပြည်သူ ဆိုတာ ပိုင်ရှင်သူဌေး
အစိုးရ ဆိုတာ သူခေါ်ခိုင်းထားတဲ့ လခစား အလုပ်သမားတွေပေါ့ -
ဒီ အကြည်ညို ဆိုတဲ့ဟာကြီးက ပျက်ခြင်းပျက် ဘယ်သူပဲပျက်စရာရှိမလဲဗျာ !
ပိုင်ရှင်သူဌေး နဲ့ အလုပ်သမား လေ -
အလုပ်သမားက သောက်တလွဲတွေလုပ်လို့ပဲ သူဌေးခမြာ သိက္ခာတွေကျ အရှက်တွေရပြီး အကြည်ညိုပျက်စေတာပဲ ဖြစ်တော့မပေါ့ ဗျ !
အဲ့တော့ အဖြေကထွက်ပြီလေ -
နို င် ငံတော် အ ကြ ည် ညို ပျ က်စေ မှူ့ အစား
ပြ ည် သူ ကို အ ကြ ည် ညို ပျ က်စေ မှူ့ သာ ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျ လို့ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းပွင့်)တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
The 88 Generation - Public Relation
နေပြည်တော်ရှိ နှင်းဆီစံအိမ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ
(၁) ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးကိစ္စများ၊
(၂) အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်
(၃)၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွင်း တွေ့ကြုံလာရနိုင်သည့် အရေးကြီး
(၅) တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စသည်တို့ကို
ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပူးပေါင်းအဖြေရှာကြရန် ဆွေးနွေး
- နေပြည်တော် ၊ မတ်လ-၁၄-၂၀၁၅ ။
ပြည်သူလူထုကို ချီးခွေးနိုင်သလိုနိုင်ခဲ့ကြသူများဖတ်ဖို့။ ။
သမ္မတရုံးကဖွတ်တွေက တရုတ်ပြည်ဘက်ခြမ်းမှာ ရွာသား ၄ ယောက်သေတဲ့ကိစ္စကို ဗမာစစ်လေယာဉ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ဗြောင်ငြင်းလိုက်လို့ တရုတ်တွေတင်းပြီး အဆင့်မြင့်လေယာဉ်ပစ်ဒုံးတွေ၊ အဝေးပစ်လက်နက်ကြီးတွေ နယ်စပ်ကို ဒီနေ့ ထပ်ပို့လိုက်တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖန်ကျန်းလုံက မင်းအောင်လှိုင်ကို တိုက်ရိုက် ဖုံးဆက်ပြီးဆဲ၊ အချက် ၃ ချက် တောင်းဆို။
၁။ ဖြစ်စဉ်အမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရမယ်။ တောင်းပန်ရမယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေ အရေးယူရမယ်။
၂။ ထိခိုက်တဲ့ရွာသားတွေအတွက် လျော်ကြေးအပါဝင် ထိုက်သင့်တာလုပ်ပေးရမယ်။
၃။ ဒါမျိုး နောက်မဖြစ်အောင် တာဝန်ယူရမယ်။
မင်းအောင်လှိုင်က အဲဒါတွေလုပ်ပေးဖို့ အဖွဲ့တဖွဲ့လွှတ်ပြီး စီစဉ်ပါ့မယ်လို့ လေပြေထိုး။
အဆဲခံလိုက်ရပြီးနောက် ဗမာစစ်တပ်တွေ ကိုးကန့်မှာ ဒီနေ့တနေ့လုံး အမြောက်လဲမပစ်၊ လေယာဉ်လဲမပျံဘဲ ငြိမ်ကုပ်နေ။ မနေ့တနေ့ကတက်လာတဲ့ တပ်မ ၆၆ တွေလဲ ဘယ်မှ မထွက်ဘဲ ငြိမ်နေ။
မန္တလေးက ဒိန်းဒေါင်အဖမ်းဆီးခံထားရာကဘာသတင်းမှ မကြားရတော့
Aye Thitsar Aung
ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ဝန်းရံပေးရင်း လက်ပံတန်းအကြမ်းဖက်မှုမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကိုဒိန်းဒေါင် ခေါ် ကိုစိုးမိုးနိုင် ကိုလည်း ကျမတို့ မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုဒိန်းဒေါင်ဟာ ခါတော်မှီနိုင်ငံရေးသမားတဦး မဟုတ်ဘူး။ ၈၈၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးမှာကတည်းက စစ်အစိုးရနဲ့ ဖောက်ပြန်သူအပေါင်းကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်လာတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားထုကို ဝန်းရံပေးရင်း အဖမ်းဆီးခံထားရာက ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့တဲ့အတွက် စိတ်ပူရပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်အသုံးပြုသူတဦးလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုဒိန်းဒေါင်းပုံကို မိတ်ဆွေတို့ မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အစွန်ဆုံးမှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ထိုင်သပိတ်မှောက်နေတဲ့ ကိုဒိန်းဒေါင်
နာမှု ကူညီရေး (ရန်ကုန်) ကားပေါ်မှာ ဒါဏ်ရာ ရတဲ့သူ မပါ ပါဘူးလို့ ဖြေထားတာ တွေ့လို့ ကျွန်တော့် အင်္ကျီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီသွေးတွေဟာ ကျွန်တော် တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရဲ့သွေး အများစုပါ။ ကျွန်တော့်လက်ကတော့ အနည်းငယ်ပါ။
လက်ပံတန်းက မြေမှုန်တွေ ၊ သမိုင်းကြွေးသွေးတွေ မလျှော်မဖွတ် ဒီအတိုင်း သိမ်းထားမယ်။
၁၄. ၃. ၁၅
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား အစိုးရက ပိုက်စိပ်တိုက် ဆက်လက်ဖမ်းဆီး။
မတ် ၁၃ ရက် နံနက် ၁ နာရီ ဝန်းကျင်က ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
အဖွဲ့ဝင်လေးဦးအား ဧည့်စာရင်းစစ်မည်ဟုဆိုကာ အလုံရဲစခန်းသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
သွားခဲ့ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ယင်းလေးဦးစလုံးကို အခြားနေရာသို့ ထပ်မံခေါ်ဆောင်
သွားခဲ့သည်ဟု ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဗကသအဖွဲ့ဝင် ကိုသီဟဝင်းတင်၏ မိခင်ထံမှ
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ဗကသအဖွဲ့ဝင်များမှာ ကိုသီဟဝင်းတင်၊ မဟန်နီဦး၊
ကိုအောင်မိုးထွန်း (ခ) ကိုမိုးထက်နေ၊ ကိုထက်ညီညီအောင်တြို့ဖစ်ပြီး အလုံမြို့နယ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်၊ အောင်ဇေယျလမ်းရှိ နေအိမ်မှ ဧည့်စာရင်းစစ်ရန် ရှိသည်ဟု
သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါ။ အခု
စခန်းမှာ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ စစ်ဆေးစရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်”ဟု အလုံမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲမှူးထွန်းရွှေက The Daily Eleven သို့ နံနက် ၁ဝ နာရီဝန်းကျင်
သို့သော်လည်း နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် အလုံမြို့မရဲစခန်း နောက်ပေါက်မှ ဗကသအဖွဲ့ဝင်
လေးဦးကို 3D/2403 (NPW) တိုယိုတာ၊ ဟိုင်းအေ့စ်ကားဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
ဟု မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ ကိုသီဟဝင်းတင်၏ ညီဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။“၁၂ နာရီ ကျော်
ကျော်လောက်က ဆွဲသွားတာ။ ဧည့်စာရင်းစစ်မယ်ဆိုပြီး ဆွဲသွားတာ။ အမှန်တကယ်က ဧည့်စာရင်းစစ်မယ်ဆို အခုလောက်ဆို ပြန်လွှတ်ပေးရတော့မယ်။အလုံရဲမှူးကို မေးကြည့်
တော့လည်း သူက မသိဘူး။ ဘယ်ခေါ်သွားတာလဲ ဆိုတော့လည်း မသိဘူးတဲ့။ သူတို့
မသိရင် ဘယ်သူသိမှာလဲ။ ကျွန်မသားက မျိုးချစ်စိတ်ရှိလို့ အခုလို ပညာရေးပြုပြင်
ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်နေတာပါ။ အခုပညာရေးစနစ် ဘာကောင်းလို့လဲ။ကျွန်မလည်း ကျောင်း
ဆရာမ တစ်ယောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပညာရေးစနစ် မကောင်းတာကို သိတယ်။ ကျွန်မသား
က လူဆိုး၊ သူခိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို လက်လွတ်စပယ် ခေါ်လို့မရဘူး”ဟု ဖမ်းဆီး
ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည့် ကိုသီဟဝင်းတင်၏ မိခင်ဒေါ်လီလီထွေးက ပြောကြား
ယခု ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဗကသအဖွဲ့ဝင်များသည် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်
စစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူများဖြစ်ပြီး ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်
များ ဖြစ်ကြသည်။မတ် ၁၃ ရက် နံနက်ပိုင်း စတင်ဖမ်းဆီးစဉ်က ငါးဦးဖြစ်သော်လည်း
ကျန်တစ်ဦးမှာ AFP သတင်းဌာနမှကင်မရာရိုက်ကူးသူ ဖြစ်သောကြောင့် မေးမြန်း
စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည့် မဟန်နီဦး၏ဖခင် ဦးထွန်းဦးကလည်း“ကျွန်တော့်
သမီးဆိုရင် အဲဒီမှာလည်း (လက်ပံတန်း)မှာလည်း ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို
ဖမ်းတယ်ဆိုတာ အရင်လို အစိုးရပုံစံအတိုင်း ပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့
ကျွန်တော့်သမီးက ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ မနက် ၉နာရီလောက်
အထိ စခန်းထဲမှာ မြင်ရပြီးတော့မှ ဗြုန်းဆို မတွေ့ရတော့တာ။ ဒီလို လူမသိ၊
သူမသိတွေ လျှောက်လုပ်နေတာဟာ လူကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် မဟုတ်ဘူး”ဟု
အဆိုပါ ဗကသအဖွဲ့ဝင် လေးဦးအား မည်သည့်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်
ဆိုသည်ကို အလုံမြို့မရဲစခန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးဝင်းစိန်
တို့ကို မေးမြန်းသော်လည်း အဆက်အသွယ် မရသေးပေ။ယင်းသတင်းကို မတ်
၁၃ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်က ဧရာဝတီသတင်းဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်
ဖော်ပြခဲ့ရာတွင် အလုံမြို့မရဲစခန်းမှ မြို့နယ်မှူးရဲမှူး ထွန်းရွှေက ဗကသ ကျောင်းသား
လေးဦးထဲမှ ကိုထက်ညီညီအောင်ကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ကျန်သုံးဦးကို ပဲခူးတိုင်းအစိုးရ
အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်သည်ဟု ဖြေကြားသည်။
သို့သော် အလုံမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးတင်လှ ကို The Daily Eleven မှမေးမြန်းရာတွင်မူ ဗကသကျောင်းသားများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီး(၁)သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်း
အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပေးခဲ့သည်ကိုမူ မသိရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
လက်ရှိတွင် ဗကသ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ဗကသဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကိုမိုးထက်နေတို့ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဗကသဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုအား လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်မည်ဟုဆိုသည့် တကသမှ
ကျောင်းသားများကိုမူ ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဗကသ
ကျောင်းသားများအား နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများအဖြစ် လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် အာဏာရှင် ဦးနေဝင်း၊ ဦးသန်းရွှေတို့နှင့် ဦးသိန်းစိန်အား
နှိုင်းယှဉ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
‘‘ရဲတွေက အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က အလံကိုင်ထားတယ်။
ကျွန်တော့် ကို ဆယ့်လေး၊ ငါးယောက် လောက် နံပါတ်တုတ်နဲ့ ၀င်ရိုက် တယ်။
ခြေထောက်တွေနဲ့ ကန် တယ်။ နောက်စေ့ကွဲသွားတယ်။ မျက်နှာကို ဖိနပ်နဲ့ အကန်ခံ
ရ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို အေးအေးဆေးဆေး အဖမ်းခံ မယ်။ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့
ပြောထား တာကို လုပ်တာ။ သူတို့ကို အီးယူ က သင်ပေးတာ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ဖို့
''ရဲတွေကို ပြောချင်တာက EU က သင်တန်းပေးထားတာ ပြည်သူကို ရိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး''
မန္တလေး ရတနာပုံတက္ကသိုလ် IC ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား ရှိုင်းလင်းထက်ဇော်
ကျွန်တော်က သပိတ်မှောက်စဉ်က တပ်ဦးမှာ အလံကိုင်တဲ့သူဆိုတော့ ရဲတွေဘက်က ခဲတွေကို စပစ်တာပါ။ အဲဒီလိုပစ်တော့ ကျွန်တော့်တို့ဘက်က ကျောင်းသားတချို့လည်း မခံနိုင်လို့ ပြန်ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ ရဲတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော့်က ရှေ့ဆုံးမှာဆိုတော့ ပြေးချိန်မရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို ရဲ ၁ဝ ယောက် လောက်က ဝိုင်းရိုက်တယ်။ နံရိုးတွေကို ကန်တယ်။ မျက်နှာတွေကို ခြေထောက်တွေနဲ့ ကန်တယ်။ ဖိတယ်။ အဲဒီလိုကြောင့် မျက်လုံးနဲ့ ပါးတွေမှာ ဒဏ်ရာတွေရထားတယ်။ နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်တယ်။ နောက်စေ့ကွဲသွားတယ်။ ရဲတွေကို ပြောချင်တာက EU က သင်တန်းပေးထားတာ ပြည်သူကို ရိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား
ဖမ်းဆီးခံရပြီး နောက် ထောင်ဆေးရုံသို့ တက် ရောက်ကုသခဲ့ရကာ
အစိုးရပြောင်းမယ်ဆိုတော့ ဝန်ကြီးတွေကအစ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပဲ
အစိုးရမကောင်းကြောင်းတွေ ပွထနေတာပဲ တဲ့
ဂွင်ရိုက်ရ ဘတ်ရ ခိုးရ စာရင်းပိုတင်ရနဲ့
ရပေါက်ရလမ်းပေါင်းစုံ လုပ်စရာကို မလိုဘူး။
ရှေ့ကျရင် ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်ကြီးနဲ့
အဲဒါကို မင်းလိုက်မဖာနဲ့ ဆိုတော့.....
ဗန်းထဲက မှောက်ကျတဲ့ဇီးသီးတွေ သူများကောက်သွားမှာစိုးလို့
ဝန်ကြီးတွေကအစ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပဲ
ကဲ ...ကောင်းကြသေးရဲ့လား ...,
ကျောင်းလခမသွင်းနိုင်လို့ ၄တန်းကျောင်းသားစာမေးပွဲ ဖြေခွင့်မရ
Lincang မြို့ပေါ်ကို မြန်မာအစိုးရရဲ့အမြှောက်ဆန်တွေ ကျတရုတ်နိုင်ငံသား ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၉ယောက် ဒဏ်ရာရ
တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၉ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဗုံးကျခဲ့မှုကြောင့် တရုတ်စစ်တပ်ဟာ မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကို ကင်းလှည့်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Liu Zhenmin က မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းကို သောကြာနေ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့အပြီး ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရတပ်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် နယ်စပ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဖုန်ကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ရက်နေ့ကစတင်ပြီး တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရာက နှစ်ဖက်စလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြဖို့ တရုတ်အစိုးရက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲတွေဟာ မတ်လ ဒုတိယပတ်မှာ ပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ရာက မတ်လ ၁၃ရက်နေ့ညမှာ တရုတ်နိုင်ငံက Lincang မြို့ပေါ်ကို မြန်မာအစိုးရရဲ့ စစ်လေယာဉ်က အမြှောက်ဆန်တွေ ကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ထိပ်တန်းအရေးကြီးသတင်းအဖြစ် ဖော်ပြနေပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ကို ဘယ်သူ ခန့်မှန်း မသိတဲ့ တိုင်းပြည်
ဒီ အစိုးရကို အလုပ်သမားတွေ ကလည်း မကျေနပ်ဘူး။ ကျောင်းသားကလည်း မကျေနပ်ဘူး။ လယ်သမားတွေကလည်း မကျေနပ်ဘူး။ ပြည်သူအားလုံးကလည်း မကျေနပ်ဘူး။
ဒါကို တချို့ တချို့က အတ္တတွေ များပြီး ....
ဆူပူမှုကို မလိုလားဘူး ဘာညာ အော်နေသေးတယ်။
ဆူပူ အုံကြွတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာကို ခွဲမသိ လောက်အောင် အမှောင်ဖုန်းနေတဲ့ လူတချို့ကို ပြောချင်တာ က
-အများအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားတတ်တဲ့ စိတ်မွေးပါ။
-ဟိုဘက်အိမ်မီး လောင်တာ ငါနဲ့ မ ဆိုင်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့။ မီးဆိုတာ ကူးဆက်လာမှာပါ။
-ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိပဲနဲ့ အခု အစိုးရကို ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ မထင်ပါနဲ့။ သမ္မတရဲ့ အထက်မှာ ကာလုံရှိတယ် ဆိုတာသိပါ။
-အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ကို ဘယ်သူ ခန့်မှန်း မသိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။
-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အပါအဝင် စစ်ဖက်က ရာခိုင်နှုန်းများစွာပါဝင်တဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆိုတာက မြန်မာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတာပါ။
-စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ အူကြောင်ကြောင် မပြောပါနဲ့။ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အခုလည်း စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှာပဲ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
-ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ ဆူဆူပူပူ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ အသံကောင်း မဟစ်ပါနဲ့။ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
-ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတတယ်ထားဦး ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင် မချင်း ကာလုံက သမ္မတ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။
-နောက်မှ ဥပဒေ ပြင်ကြပေါ့။ ၂၀၁၅မှာ လွှတ်တော်မှာ ပြည်သူရွေးချယ်သူတွေ များလာတော့ အောင်မြင်မှာပါလို့ ဆရာကြီး မလုပ်ပါနဲ့။ လွှတ်တော်ထဲက အစိတ်သား ရှိနေသ၍ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘာဥပဒေမှ ပြုမရပါ။
-ဒီလိုပဲ နေသားကျနေပါပြီ ဘယ် အစိုးရတက်တက် လို့ သံယောင်မလိုက်ပါနဲ့။
** ရေက tap က ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သောက်သုံးရေ အဆင့်မှီပြီလား။
** သင့်အိမ်ရှေ့ လမ်းကောင်းပြီလား။
** သင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံပြီလား။
** ရေဆိုးစနစ်ကောင်းကောင်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပြီလား။
** သင့်သားသမီး အဆင့်မှီ ပညာ သင်ကြားနိုင်ပြီလား။
** သင် နေမကောင်းရင် ဆေးကုသ စရိတ် စုဆောင်းထားနိုင်ပြီလား။
** ပိုက်ဆံရှိရင် တောင် နိုင်ငံတွင်းမှာ အဆင့်မှီ ဆေးကုသနိုင်ပြီလား။
** အိမ်ပိုင် ရာပိုင် ရှိပြီလား။
** လမ်းတွေ ကောင်းမွန်ပြီး သွားလိုရာကို အန္တရယ်ကင်းကင်းသွားနိုင်ပြီလား။
ငါတို့ အားလုံး အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မတရားရယူထားသော မိဘ (စစ်တပ် ခေါင်းကြီးပိုင်း) ကသော်လည်းကောင်း
မတရားရယူထားသော (စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပေါင်းစားနေသော) ခရိုနီ သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေမည်။
သာမာန် သူလို ... ကိုယ်လို ... ကတော့ ဒုက္ခကြီးတာနဲ့ သေးတာပဲကွာ မယ်။
ဒါကို ဘာလို့ ဘာလို့ ဘာလို့ .........
*** ပညာရေး ဥပဒေ ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း တောင်းဆို ကြိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ
*** လယ်သိမ်းခံရလို့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ လယ်သမားတွေ
*** လုပ်ခ လစာ နဲ့ မ စားလောက်လို့ အခြေခံ လစာတိုးတောင်းတဲ့ အလုပ်သမားတွေ
ကို ဆူပူသူတွေ လို့ စွတ်စွဲနေသလဲ။
- အမှန်တရားကို မြင်နိုင်တဲ့ အသိညဏ်
- တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ အသိညဏ်
- အားနည်းသူကို ငဲ့ညှာတက်တဲ့ စိတ်ထား
- ဒုက္ခရောက်သူကို ကူညီချင်တဲ့ စိတ်ထားတွေ
သင့်မှာ ပြောက်ဆုံးနေရင် .....
သင်လူရော ဟုတ်ရဲ့လား .....လို့ မှန်ထဲမှာသေချာကြည့်ပြီး ... ပြန်မေးကြည့်ပါ။
့ ၆ ဦးရဲ့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားတာကို ပယ်ချ
rပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကိုမင်းသွေးသစ်၊ ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း၊ ကိုချမ်းသာ၊ ကိုရဲဝင်းအောင်နဲ့ ကိုသာဒွန်းဇော်တို့ ၆ ဦးရဲ့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က လိုက်ပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသက်ထွန်းက အမှုစစ်ဆေးနေတဲ့ ကာလဖြစ်တာကြောင့် ခွင့်မပြုတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး ပယ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် သွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့ ဦးရောဘတ် စန်းအောင်က ပြောပါတယ်။
''အမှုညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းတောင်းမယ်၊ ရှေ့နေ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှဲစာလည်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့ သာယာဝတီထောင်မှာ လျှောက်လွှာသွားတင်ပါတယ်၊ လျှောက်တော့ နယ်လုံဝန်ကြီးက အမှုစစ်ဆေးနေ ဆဲကာလဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ ခွင့်မပြုဘူးလို့ ပြန်ကြားပါတယ်၊ ပြန်ပေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ရှေ့နေရှေ့ရပ်နဲ့ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်၊ မပေးတာတော့ ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလေ၊ ရုံးတင်တဲ့နေ့ကျတော့ ကျနော်တို့ဆက်လက် ပြီးတော့ ကြိုးစားမှာပါ''
အဲ့ဒီကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ရုံးထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။